Jahwareer ka taagan goobta lagu qabanayo Doorashada xubnaha labada aqal ee Gobolada Waqooyi – Xeernews24
Jahwareer ka taagan goobta lagu qabanayo Doorashada xubnaha labada aqal ee Gobolada Waqooyi
December 1 (XeerNews24)
Jahwareer ayaa ka taagan halka lagu qabanayo doorashooyinka Aqalka Hoose iyo Aqalka Sare ee xubnaha ka soo jeeda Gobollada Woqooyi , kaasoo lagu waday inay ka dhacaan Xarunta Gaadiidka Booliska ee degmada C/casiis.
Sida ay sheegayaan wararka Saraakiil ka tirsan Xafiiska Qaramada Midoobey ee UNSOM iyo Xafiiska Ra’iisul Wasaaraha ayaa soo fara geliyeen doorashada xubnaha Gobolada waqooyi, iyadoo isku dayaya inay ka weeciyaan goobta horay loo qorsheeyay inay ka dhacaan doorashooyinka.
Wararka ayaa sheegaya in Nuuradiin Diiriye oo ka mid ah La Taliyeyaasha Xafiiska UNSOM iyo saraakiil ka tirsan Xafiiska Ra’iisul Wasaaraha ay gadaal ka riixayaan sidii doorashooyinka xubnaha ka soo jeeda Gobolada Waqooyi loo wareejiyo Xarunta Xalane.
Guddiga Federaalka ee Hirgelinta Doorashooyinka Dadban iyo Guddiga Doorashooyinka Gobollada Waqooyi ayaa ka biya diidan qorshaha la doonayo in doorashada labada Aqal loogu wareejiyo Xarunta Xalane oo ah goob amnigiisa aad u adag yahay.
Sidoo kale Guddiga doorashooyinka ayaa ku doodaya in hadii ay dhacdo in doorashada xubnaha labada aqal loo wareejiyo Xarunta Xalane ay mas’uuliyad daro ku tahay guddigooda, isla markaana ay fadeexad ku keeneyso howlahooda, maadaama horay u qorsheeyeen in doorashada gudaha Muqdisho ka dhacdo.
Guddiga lagu magacaabo Task Force ee u xilsaaran ammaanka iyo qaabeynta Doorashooyinka Gobollada Woqooyi ayay iyana masuuliyad daro ku tahay in shaqadooda loo weeciyo goob aanan ahayn halka Guddiyada Doorashyinka Dadban ee Heer Federal iyo Heer Dowlad Gobolleed (Gobollada Woqooyi) ay u qorsheeyeen oo ah xarunta Gaadiidka Booliska.
Faragelinta iyo qorshahan ka socda Xafiiska Ra”iisul Wasaaraha iyo Xafiiska Qaramada Midoobay ee UNSOM) ayaa dhabar jab u keeni kara doorashooyinka Gobollada Woqooyi ee la filayay in maanta ama berri ay ka bilowdaan xarunta Gadiidka Booliiska, iyadoo shalay lagu qabtay doorashada mid ka mid ah xubnaha Kursiga Xildhibaannimo ee Mahad Cabadalla Cawad oo Muqdisho lagu soo wareejiyay iyo doorashada xubnaha beelaha banaadiriga..
https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2016/12/siyaasiyiinta-dirta-waqooyi-170x114.jpg 114 170 admin https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2017/06/xeernews-1.png admin2016-12-01 18:33:332016-12-01 18:33:33Jahwareer ka taagan goobta lagu qabanayo Doorashada xubnaha labada aqal ee Gobolada Waqooyi
Qaybtii labaad ee isbarbardhiga kaligii taliye M.S.Barre,iyo intii ka damba... Daawasho wacan Wiilkii Soomaaliyeed ee weeraray Jaamacad ku taal Maraykanka...